Rubber Raw Material Kucheka Machine - China Qingdao rakadzikama Machinery
Rubber Raw Material Kucheka Machine
Product Description Usage Rubber mbishi zvinhu nokuveza muchina ndechimwe chezvinhu kushandiswa michina iri mbishi zvinhu processing.It ainyanya kushandiswa kutema dzinongoitika rabha, chakaita zvokugadzirwa rabha, uye nezvimwe epurasitiki zvinhu zvidimbu zviduku, izvo kugutsa zvinodiwa. Uyewo, zvakakodzera kuti iiswe pedyo rabha chisanganiso. Structure inoratidza Izvi rabha nokuveza muchina iri nyore chivako, anonzwisisa magadzirirwo uye nyore kushanda. Zvinonzi kazhinji yaisanganisira kutema banga, puranga, humburumbira, nhangemutange mbishi kuzora ...
Rabha mbishi zvinhu nokuveza muchina ndechimwe chezvinhu kushandiswa michina iri mbishi zvinhu processing.It ainyanya kushandiswa kutema dzinongoitika rabha, chakaita zvokugadzirwa rabha, uye nezvimwe epurasitiki zvinhu zvidimbu zviduku, izvo kugutsa zvinodiwa. Uyewo, zvakakodzera kuti iiswe pedyo rabha chisanganiso.
Izvi rabha nokuveza muchina iri nyore chivako, anonzwisisa magadzirirwo uye nyore kushanda. Zvinonzi kazhinji zvaisanganisira nokuveza banga, puranga, humburumbira, nhangemutange mbishi rabha uye hydraulic system.It adopts kuti vachidzikisa vharuvhu kuzvidzora kuti aponese simba.
Dziviriro bonde kutungamirira yakaiswa pasi nokuveza banga kudzivirira kumucheto nokuveza knife.When kushanda, akaisa mbishi rabha pasi nokuveza banga uye gura duku akakodzera rabha vaiitawo kubudikidza nemuti of hydraulic mafuta humburumbira.
Oil humburumbira kumanikidzwa (KN)
nguva rabha nokuveza kufamba (S)
Uchitikurudzira miganhu (L * W * H)
Next: Rabha Filter Strainer Extruder Machine
Double Rolls Rubber Kucheka Machine
New Condition Rubber Slippers kutema Machine
Philippines rabha nokuveza muchina
Ndege Rubber Cutting Machine
rabha misa nokuveza Machine
rabha hosipaipi nokuveza Machine
Nguva Belt Cutting Machine
Tire Kucheka Machinery
Tire Cutting recycling Rubber Powder
Trade Simbiso Rubber Slippers Cutting Machine
Tsvina Tire And Rubber Raw Material Kucheka Machines
Tsvina Tire Cutter Machine
Tsvina Tire Cutter
Wire Belt Kucheka Machine
PVC Plastic Sheet Water chimiso Extruding waMaki ...
Rabha Tube Hose Pipe Sheet rakavhara Strip Extruder